Iye zvino inowanikwa Solus 1.2.1 naBudgie uye neMATE | Linux Vakapindwa muropa
Solus 1.2.1 ikozvino yawanikwa naBudgie uye neMATE
Maawa mashoma apfuura iyo nyowani vhezheni yaSolus, iyo iri kuwedzera mukurumbira Gnu / Linux kugovera, yakaburitswa Kugoverwa uku hakungori chete neBudgie sedesktop yayo huru asi kubva zvino zvichienda ichavawo neMATE, kuve Solus MATE hutsva hwepamutemo hwekuparadzira.
Solus 1.2.1 inouya nezvakawanda zvinogadziridzwa uye zvakawanda kugadzirisa izvo zvinoita kuti ive ye chakanyanya kukwira-kusvika-zuva kusiri-kupukunyuka kusunungurwa kugoverwa izvo zviripo mumusika. Izvi zvinokodzera pakati pezvimwe zvinhu kune madhiraivha matsva akawedzerwa, gadziriso yeBudgie uye kuwedzerwa kweMATE 1.16 uyezve iyo nyowani nyowani.
Solus 1.2.1 ichave neiyo yepamutemo vhezheni neMATE
Tinotanga neyekupedzisira. Solus 1.2.1 kernel iri 4.8.2, ndiko kuti, vhezheni yazvino kernel yakagadzikana iriko. Izvo zvinoita kuti ive imwe yedzakachengeteka uye dzakagadzikana vhezheni kunze uko. Solus yakavandudza Software Center uye nerutsigiro rwayo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vashandisi kuunza mapakeji matsva uye zvirongwa muSolus 1.2.1. Uye zvakare, akasiyana maficha graphic anounzwa, kwete chete maNouveau madhiraivha, asiwo zvakare Vulkan uye kunyange Microsoft's Surface Pro 3 madhiraivha emifananidzo.
Budgie anongwarira uye akapukunyuka kupfuura nakare kose, kunyangwe iyo nyeredzi yekuburitswa iyi pasina mubvunzo Solus MATE, vhezheni itsva inotarisirwa nevakawanda. Vhura Solus 1.2.1 musimboti wakagara MATE vhezheni 1.16. Asi panguva ino iyo desktop inogadziridzwa uye yakashandisirwa marongerwo, kuve ine simba kana kupfuura seBudgie desktop.
Vaya vane vhezheni naBudgie, munogona kuwana yazvino vhezheni kuburikidza nekuzvigovera pachayo, inozozvivandudza. Avo vanoda kuyedza Solus MATE 1.2.1 vanofanirwa download kumisikidza mufananidzo uye ita yakachena kuisirwa, chimwe chinhu chinodhura asi icho ichave yakakosha kune vazhinji vanoda tafura iyi. Saka inguva yekugadzirira kuiswa masikati Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Solus 1.2.1 ikozvino yawanikwa naBudgie uye neMATE
Solus neMate? Ndekupi kunakidzwa? Chinhu chakanaka pamusoro paSolus ndiBudgie, kana iwe ukabvisa izvi, panongova neimwe nzira yepakati.